Never gaghị abụ onye iberibe ruo mgbe ị kwụsịrị ịnwale. - Mike Ditka - Pedia na-ekwu okwu
Onweghi eziokwu dị n’edemede karịa eziokwu ahụ bụ na ịrụsi ọrụ ike na-erite uru nke ya. Ndụ jupụtara n'ọsọ. Inweta ihe ịchọrọ ma ọ bụ na-ele anya ya nwere ike ọ gaghị adị mfe. Nke ahụ apụtaghị na anyị kwesịrị ịda mbà. Nagide ndidi na ịnọgide na-agbasi mbọ ike na-enyere aka nweta ebumnuche gị.
Are bụghị onye emeriri ma ọ bụrụ na i mebeghi ihe mgbaru ọsọ gị. Mana n’ezie ị bụ onye e meriri ma ọ bụrụ na ị kwụsịla ịgbalị. Mmadu nwere ike iche na a nwere ike try ju ihe ị bara. Ma eziokwu bụ na anyị kwesịrị ịgbalị ókè anyị.
N’ezie, ekwenyeghị na ọnọdụ nke ọnọdụ ahụ, mana anyị kwesịrị ịghọta na ọ bụrụ na otu ụzọ emechie ụzọ ọzọ emepe. Ọchịchọ anyị inweta ihe agaghị agbada. Anyị kwesịrị inwe ike ịchọ ohere ọhụụ mgbe niile ka anyị nwee ike ịga n'ihu na ndụ.
Ihe ị na-ewere dị ka mfu bụ naanị obere oge na ndụ ị ga - emeri ma ọ bụrụ na ị nwaa. N’ihi ya, ahapụla onwe gị ma mee ka echiche gị dị elu. Nchekwube na-enyere anyị aka ime nke ọma. Anyị ahụzie ọkụ ahụ na njedebe nke ọwara ahụ wee malite ịrụ ọrụ na ya.
Ekwekwala ka onye obula gwa gi na i fuola. Gwa ha na ị ga - achọta ụzọ wee weghara ya dị ka ihe ịma aka ime nke ọma. Nke gi omume ga-ekwu okwu karịa okwu ọnụ ọtụtụ ga-ele anya gị maka nnabata gị.
Kwuru okwu ama ama banyere anwa
Quires Nkọwapụta amara ama
Kwalite Sports Quotes
Ntuziaka Banyere ingnyocha Nke Kacha Mma Gị
Quotes Short Sports Quotes
Onye mmeri Vs Loser Quotes